XOG: Lafta-gareen oo Aqbalay Dalabkii Farmaajo & Qorshaha cusub ee Doorashada Aqalka sare | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: Lafta-gareen oo Aqbalay Dalabkii Farmaajo & Qorshaha cusub ee Doorashada Aqalka...
XOG: Lafta-gareen oo Aqbalay Dalabkii Farmaajo & Qorshaha cusub ee Doorashada Aqalka sare
Madaxweynaha K/galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen ayaa wada qorshe uu ku bilaabayo doorashada Baarlamaanka gaar ahaan mida Aqalka sare, waxaana la leeyahay doorashadan waa ay ka lacag badan tahay tii hore.
Lafta-gareen oo shalay ku noqday Baydhabo wuxuu noqonayaa Maamulka Koofur Galbeed uu noqonayo maamulkii u horreeyay ee bilaaba doorashada Aqalka Sare, sababta safarka Madaxweyne Lafta Gareen qeyb ka tahay bilaabida doorashada.
Xubno u taagan Aqalka sare oo ku kala sugan Muqdisho iyo Baydhabo ayaa maalmaha soo aadan ku laabanaya magaaladaas si ay uga qeyb galaan Doorashada uu muranka hareeyay.
Warar aan helnay ayaa sheegaya in musharaxiinta qaar ee aan ku xirneyn Villa Somalia ay ka baqayaan in lacagna uga baxday soona bixi waayaan.
Madaxweyne Farmaajo oo doonaya inuu Kursiga ku soo laabto ayaa sameynaya wax kasta oo u suurta gelinaya sidii uu u soo noqon lahaa, waxaana laga cabsi qabaa in doorashada Khatar amni horseedo.